Ziziphi iiNtlanzi ezona ziNtengiso zeWebhsayithi? - I-Semalt Anwer
kwiindawo ezahlukeneyo. Ezi zixhobo zinceda kakhulu ukuqala, ii-bloggers, ii-freelancers kunye nakwamashishini amashishini amakhulu. Baya kukhangela okanye baqhawule idatha ngokuzenzekelayo okanye ngokuzenzekelayo, bathathe ulwazi olutsha kunye olukhoyo kwaye ulondoloze ukufikelela lula.
I-Bixo yintengiso yewebhu kwaye ithuluzi lokucoca idatha . Ingumthombo onamandla ovulekileyo we-web mining toolkit osebenza njengechungechunge lweepayipi zokungena kunye nokwakha ulwazi olumiselweyo, ukuqokelela kwimithombo ethile. Ungayisebenzisa kwi-shishini lakho elincinci nelininzi kwaye ulondoloze yonke idatha ebalulekileyo kwi-hard drive yakho ngokuchofoza nje.
DEiXTo yaziwa nangokuthi i-AEiXTo. Ngenye yezona zixhobo ezinamandla kakhulu nezidumileyo zedatha ezisetyenziswe kwisiseko esibalulekileyo se-Document Object Document. Ikuvumela ukuba ukhiphe idatha echanileyo kwaye unokuhlela iifayile zakho kwifomu yealfabhethi. Kukunika ukufikelela okulula kwiindlela ezahlukeneyo. Ngaphandle koko, unakho ukucwangcisa nini kunye nendlela yokwenza iifayili. Igcina ixesha elininzi, iinzame kunye namandla.
Iipatheni yenye yeyona ndlela epholile kakhulu kwaye ibhetele kakhulu yokurhweba iwebhu kunye neenkqubo zokukhahlela. Ingundoqo imodyuli ye-mining web kubasebenzisi bePython kwaye inezixhobo ezinxulumene ne-Wikipedia API, i-Google, i-HTML DOM kunye ne-Twitter. Akugcini nje ukusila kunye nokukhwabanisa iziza zakho kodwa kwaye ikwazisa iinkcukacha ezifanelekileyo kwaye iququzelele iifayile ngokweemfuno zakho.
I-Scrappy yintengiso ye-intanethi yokukhwela ehamba nomthombo ovulekile kunye nezikhokelo zokusebenzisana. Inceda ukukhipha idatha kwiiwebhsayithi ezincinci kunye ezinkulu. Abasebenzisi basetyenzisile imigaqo yedatha yokukhutshwa kwaye bavumele iShrapy ukuba yenze okunye. Ibhaliwe kwiPython kwaye isebenza kwi-BSD, Mac, Windows kunye neLuxu.
80legs yinkonzo enamandla neyaziwayo yewebhu ezayo kunye neenkcukacha ze-Web Web Crawling kunye nezinye iinkcukacha. Ingakwazi ukufikelela kwii-web pages ezigidi ezintlanu ngaphakathi kweyure, kwaye ipakethe yayo yenyani inika iinkonzo zamahhala ezisekela ngaphezu kwe-12,000 URL. Nangona kunjalo, i-premium version yayo inkulu kakhulu ekusebenziseni ishishini kunye neendleko eziphantse zi-$ 40 ngenyanga.